Sida loo Beddelaan TS Videos in Windows 8 Tayada sameecadda
> Resource > Windows > Sida loo Beddelaan TS Videos in Windows 8 leh sameecadda Quality
TS, aka il gaadiidka MPEG, waa qaab caadiga ah ee gudbinta iyo kaydinta of audio, video, iyo xogta, waxaana loo isticmaalaa in nidaamka baahinta sida DVB iyo ATSC. Si loogu badalo aad TS files si / ka dhan ah qaabab loo jecel yahay tayo sameecadda ah in Windows 8, waxaad u baahan tahay Converter xirfadeed iyo fududahay in la isticmaalo TS: Wondershare Video Converter (Windows 8/7 / XP / Vista taageeray).
TS Converter for Windows 8 qaadan kartaa video kasta oo TS ka file baahinta HDTV ah oo iyaga loogu badalo in ay virtuallly oo dhan qaabab loo jecel yahay, ciyaartoyda warbaahinta la qaadi karo, telefoonada gacanta iyo PDAs. Dhanka kale, diinta video inay qaab TS aadan mar dambe dhibin doonaa tan iyo waxaad kala soo bixi this TS movie Converter daaqadaha 8. Ma rabtaa inaad wax ka bedel TS soo gudbiso? Just isticmaali editor TS waxaa ka mid ahaa in this TS Converter file. Hawlaha tafatirka Common sida goo, dalagga, isku shaandheyn, darsamaan, subtitles, iwm ayaa dhamaantood ka mid ahaa. Hadda download maxkamadda xor ah oo dhex socdo hoos ku faahfaahsan hage.
Fiiro gaar ah : Haddii aad jeceshahay in aad si toos ah loogu badalo TS in DVD iyo gubi DVD la image fiiqan iyo saamaynta audio kaamil ah, fadlan eeg tutorial this: Beddelaan / Guba TS in DVD (Windows 10 ka mid ah) .
1 darsada il videos
Orod software this, oo aad soo daaqaddii barnaamijka hoos ku qoran. Si aad ku dari aad videos files, laba siyaabood waa availble:
Click Add Faylal ay xitaa buugga file iyo dooro TS videos aad rabto in aad si loogu badalo.
Si toos ah jiidi aad files TS in ay interface in Dufcaddii.
Marka aad soo dhoofsadaan files, waxaad arki doonaa waxay muujiyeen sida thumbnails suuqa kala tagay macluumaad file buuxa, sida duration, size, xallinta, subtitles, track audio, iwm Waxaad u habayn karaan si qaab beddelidda iyo iyaga ku eegaan adigoo gujinaya ah ciyaaro icon.
2 Sheeg qaab wax soo saarka iyo folder
Sida kor ku xusan, TS video Converter for Windows 8 dhoofin karto tan oo ah qaabab iyo presets qalabka kala duwan. Si aad u hesho suuqa kala saarka, riix image qaab ee shaashadda midig. Halkan, waxaad ka qaadan kartaa wax video SD oo maqal ah, HD video, xitaa video 3D sida wax soo saarka. Tusaale ahaan, waxaad dooran kartaa "qaab"> "Video"> "Wmv".
Si aad u dhigay folder wax soo saarka, fadlan riix saddex dhibcood ka sokow Output Folder hoose ee suuqa kala barnaamijka, ka dibna mid ka mid dooro si loo badbaadiyo faylka la gediyay. ( Fiiro gaar ah: Ka dib markii ay ku dhameysatay kaalinta diinta, kaliya aad u riixi kartaa Open Folder inay sooman yihiin oo ku yaalla faylasha la gediyay.)
3 Edit TS video istareexsan (optional)
Intii aanay, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad kala qaybsan tahay ama ku milmaan qaar ka mid ah clips aad xiiso u wada, dalagga baararka madow si shaashad buuxda, ama ku darto subtitles aad ka doorteen in ay wax soo saarka. Xaaladdan oo kale, Video TS ka Converter for Windows 8 timaadaa editor ah anfacaya TS kaa caawinaya in aad u astaysto fudayd. Just guji Edit ka sokow video kasta oo horyaalka la furo suuqa kala edit ah. Hoos waxaa ku qoran shaashada ah.
4 bilow si loogu badalo file TS in Windows 8
Markii wax walba u dhacaan sida aad jeceshahay, kaliya ka dhacay Beddelaan inay iska TS Converter for Windows 8 daryeelka qaadataan inteeda kale.
Marka dhan laga badalay oo dhameystiran, waxaad soo dhoofsadaan laga yaabaa in ay diinta aad huriyaan dab, Nexus 7, iPad mini, iPhone 5, ama ciyaaryahan warbaahinta la qaadi karo si ay ugu raaxaystaan ​​on go ah. Hambalyo!
Sida loo jar / Split / goo TS Files
Sida loo Beddelaan TS in MP4 ee Mac OS X Libaaxa / Windows
Top 7-ada Rasuul for Windows phone
25 Tilmaamo cusub ee Windows 10 in aan ka hagi sugto si ay u arkaan
Sidee inuu ka soo kabsado formatted Photos ka Windows 8
AVI Converter Windows 8: Beddelaan AVI ama ka soo video kasta oo Windows 8
Download Rooti ugu fiican ee Windows Alternative 8/7 / Vista / XP